MACLUUMAADKA TARANKA JACK-A-BEE DOG IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Jack-A-Bee Dog iyo Sawiro
Beagle / Jack Russell Terrier Isku-dhaf ah Eeyo
'Tani waa Elena (Ellie). Waxaa lagu korsaday Adeegyada Daryeelka Xayawaanka iyo 2 toddobaad ka dib milkiilaha hore ayaa ka tegey iyada oo kaliya 2 bilood jir. Waan helay iyada oo aan raacay borotokool iyada oo u kaxaynaysa dhakhtarka xoolaha, aniga oo ogaanaya inay microchiped tahay, ogaanshaha milkiiluhu aanu rabin iyada waana markii aan noqday iyada waligeed hooyo. Iyadu waa mid aad u caqli badan. Barte dhakhso badan, aad u fudud dheriga iyo tareenka sariirta . Sida ay leeyihiin dhammaan milkiileyaasha kale ee Jack-a-shin, waxaan si dhakhso leh u xaqiiqsaday in Ellie uu ahaa kubbadda dhogorta yar tamarta . Waan sii soconaa socdo maalin kasta ugu yaraan 1 mayl, ka dheer haddii ay suurogal tahay. WIXII AY QAADO AYAGAY KU HAYSAA. Waxay ku qabataa wax cajiib ah raacitaanka baabuurta. Waxaan go'aansaday inaanan siiyin alaabada ay ku ciyaaraan ee dheeraadka ah maadaama ay ku kala jeexjeexeyso wax ka yar saacad. Waxay jeceshahay iyada cufan iyo barafaysan Kong's. Waxay ka doorbidaa inay ciyaareyso halkii ay wax ka cuni lahayd si ay ugu sasabto cunto ama daaweyn had iyo jeer ma shaqeyso. Waxay leedahay 5 walaalo ah bisadaha oo waxay umuuqataa inay sameyso ok inta badan waqtiga eeyo kale cabir kasta ha lahaadee. Waxay jeceshahay dadka an waa mid saaxiibtinimo badan. Jiridiisa waxay u egtahay a Gorgor . Way dheer tahay, caato ah oo xoog badan. Ma aqaano inay tahay wax cawl laakiin iyadu aad bey u boodi kartaa si aad u sarreeya. Waxay jeceshahay socodka dabeecadda adag. Marwalba way faraxsan tahay oo way jeceshahay. 8 bilood ayey ku jirtaa sawirkan. '
Jack-A-Bee maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Gorgor iyo Jack Russell Terrier . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
'Glasgow, Jack-A-Bee waa an firfircoonaan iyo eey caqli badan oo si fudud u barto tabaha. Asal ahaan ka soo jeeda Georgia, samatabbixintan ayaa hadda ku nool Florida, oo ma jecla wax ka badan socodka , iyo calalinta on toy uu jecel yahay. Markuu siddeed bilood jirsaday sawirkan, Glasgow wuxuu ka buuxay tamar, laakiin wuxuu bilaabay inuu xoogaa dego bilooyinkiisii ​​uhoreeyay. Isagu waa yar yahay dadka, aadna wuu uga taxaddaraa eeyaha kale, laakiin wuxuu leeyahay saaxiibbo ey badan oo uu jecel yahay inuu la ciyaaro.
'Kani waa sawirka cusub ee Jack-A-Bee. 10 toddobaad ayuu ku jiraa sawirkan. Waxaan ugu magac darnay Chase, oo midkeen naga mid ah uu qabanayo xilli kasta oo uu soo jeedo. Hooyadiis waa a Jack Russell aabihiisna waa a Gorgor . Wuu tagayaa mayl illaa mayl iyo badh socod maalin kasta , intaan roob da’in. Qof kastaa wuu jecel yahay oo waad arki kartaa sababta. '
'Kani waa eeygay Jasper, iskutallaabta Jack Russell / Beagle. Waa 10 ½ bilood jir sawirkan. Wuxuu ahaa farxad uu leeyahay. Isagu waa sahlan yahay in la tababaro oo waa arday aad u xiiso badan. Weligay ma yeelan eey bulsho ka badan. Wuxuu jecel yahay carruurta, eeyaha kale (nooc kasta iyo qaabab kasta) iyo bisadaha. Xaqiiqdii, wuxuu xitaa gacan ka gaystay korinta bisad agoon ah. Jasper iyo gabadha yar ee loo yaqaan 'Frankie' ayaa ah saaxiibbada ugu fiican. Isagu waa eey aad u weyn oo deggan oo aamusan oo cabbir yar oo aan aad u yarayn, qiyaastii 22 rodol. In kasta oo markii uu ciyo ay u dhawaqdo wax yar Beagle-y, laakiin aan lahayn gacanka. Isagu xoogaa xoog ayuu haystaa laakiin si fiican buu guriga u degaa. Isagu waa cayayaan weyne weyn oo wuxuu rabaa inuu kula joogo mar walba. Eygan wuu boodi karaa !!!! Waxaan u maleynayaa inuu u egyahay Jack Russell, badanaa maxaa yeelay dabadiisa ayaa xirneyd. Dhegihiisu way dheer yihiin markaa waa Jack Russell laakiin ma aha inta ay le'eg yihiin Beagle waana la tilmaamayaa talooyinka Tani waa eey weyn oo ku jira jirka eyga yar. '
'Tani waa Dewey, isku-darkayaga yar ee Jack Russell / Beagle, sida uu qabo dhakhtarkayaga Dr. Dave. Isagu waa afar jir, waxaanan ka helnay Bulshadeenna maxalliga ah. Isagu waa saaxiibtinimo dhammaantiis, wuuna jecel yahay socod dheer, cayrsashada geckos iyo booqashada ayeeyadiis ee Cape Cod. '
Jack-A-Bee eey yaryar oo ah 2 toddobaad jir— Waxaan ahaa dhaqameed Jack-A-Bee markasta oo dadku ila soo xiriiraan oo ay wax i weydiyaan sida loo sameeyo macluumaadka waxaan la wadaagay bartaada. Waxaan ku soo lifaaqay sawirrada qashinkeenna ugu horreeya (iyo kan ugu dambeeya) ee diiwaangashan ACHC ee ay dhashay hooyadeen Beagle (Missy) iyo Jack Russell dad (Bolin) Qashinkeena hore wuxuu ku dhashay hooyadeen Jack-A-Bee (Alley). Waxaan had iyo jeer lahaa warbixino waaweyn oo ku saabsan guriga iyo tababarka guud ahaan. Waa run inay tahay inaad diyaar u ahaato dhamaadka dhamaadka shakhsiyadda shakhsiyadeed laakiin xitaa 8 toddobaad waxaad runtii wax badan ka sheegi kartaa shakhsiyadda ardayga. Markaad tixgelinayso iskujir, dadka la soo xariiray eey toddobaadyadiisii ​​ugu horreeyay noloshiisa waa inay yeeshaan aragti wanaagsan oo ku saabsan dhinaca uu ardaygu u janjeero. Waxaan ogaaday in astaamaha jireed ee eeyaha ay sidoo kale umuuqdaan inay yihiin tilmaame nooca shakhsiyadda (laakiin had iyo jeer maahan, sidaas darteed taxaddar). Si kastaba ha noqotee, qof kasta oo tixgelinaya eey uu ku jiro Jack Russell ee khadka dhiigga waa inuu u diyaar garoobaa inta badan aad u firfircoon mararka qaarkoodna eey dalbanaya (haddiiba ay dhacdo). Abaalmarinta ayaa ka dhigaysa wax kasta oo mudan mudada dheer, in kastoo! Smart, ciyaar, jacayl iyo qurux! Kama beddeli doono ardaydayda adduunka. '
Scout the Jack-A-Bee at 12 toddobaad (Beagle / Jack Russell Terrier mix ey ey)
'Tani waa Jazz. Iyadu waa Jack-A-Bee. Waxaan ka helnay breeder oo si saafi ah u dhasha Gorgorrada oo saafi ah Jack Russells , markaa iyadu waa 50-50. Iyadu waa eeyga ugu fiican ee aan abid leeyahay. Aad u firfircoon oo leh shakhsiyad weyn. Marka firfircooni, dhab ahaantii, inay ila sii socoto xawaare dhan 15 mph 20 mayl markiiba. Waxaan ku orday iyada 1600 mayl xagaagii hore waana jeclaatay. Iyadu sidoo kale waa dabbaasha aad u jecel, god qoda, bakayle iyo xayawaan yar oo soo jiidasho leh oo aad u jecel jacaylka wiilkayaga oo da 'ahaan isku da' ah (1 ½). Waxaan kula talin lahaa iyada qofkasta oo caruur yaryar leh oo banaanka ku firfircoon. '
'Bruiser the Jack-A-Bee markuu jiray 6 sano-hooyadiis waa Beagle (Jackie Brown) aabihiisna waa Jack Russell (Simon), oo istaaga u ahaa Wishbone ee Nickelodeon! Waxaan jecel nahay shakhsiyadiisa waalan — ku raaxee '
Hanna 10-bilood jirta Jack-A-Bee— Iyadu waa eyga ugu macaan abid. Tamar badan, laakiin Gused hoyga ah. Marnaba kuma iibin doono iyada alaab nadiif ah!
Morris the Jack-A-Bee eey (Jack Russell / Beagle ey isku dhafan oo isku dhafan) oo jira seddex bilood jir— 'Aad ayuu u caqli badan yahay, wuxuu jecel yahay iskuulka eyda, durba gebi ahaanba waa jajaban yahay oo sanduuq tababaran , wuu yaqaan sida loo fadhiisto, kaalay marka loo yeedho oo jiifso. Wuxuu jecel yahay socodkiisa, iyo inuu gaariga ku raaco. '
Eeg tusaalooyin badan oo ah Jack-A-Bee
Sawirada Jack-A-Bee 1
Sawirada Jack-A-Bee 2
adhijirka Australiyaanka ah eey pule merle
Clifford sirdoonka eey casaan weyn
cas sanka pitbull husky mix
stern bern collie mix eey
cawl iyo caddaan pitbull ilmaha